पीसीआर परीक्षण कहाँ र कसरी गर्ने ? – Shasankhabar
राजेश कुमार गुप्ता । सरकारले कन्टयाक्ट ट्रेसिङ जिम्मावारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । पीसीआर परीक्षण गर्नलाई कुनै न कुनै कारण हुनुपर्छ ।
पीसीआर परीक्षणका लागि कुनै न कुनै लक्षण त देखिनुपर्छ, अथवा संक्रमितको सम्पर्कमा आएको हुनुप-यो वा सिल गरेको क्षेत्रमा हिँडेको हुनुप-यो । कुनै पनि व्यक्ति घरमा सुरक्षित तरीकाले बसेको छ, संक्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएको छैन र मास्क समुचित प्रयोग गरेको छ ।
विदेश जानलाई कोरोना रिपोर्ट आवश्यक प-यो भने सरकारी अस्पतालहरू पाटन, वीर र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण व्यवस्था मिलाइएको छ
साथै, कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन भने त पीसीआर परीक्षण गराउनुपर्ने आवश्यकता छैन । विदेश जानलाई कोरोना रिपोर्ट आवश्यक प-यो भने सरकारी अस्पतालहरू पाटन, वीर र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण व्यवस्था मिलाइएको छ ।
स्थानीय तहमा नगरपालिकाले ट्रेसिङको काम गर्दै आएको छ । प्रत्येक नगरपालिकामा रहेको स्वास्थ्य शाखाले इडीसीडी समन्वयमा स्वाब संकलन गर्न सक्छ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललगायत सरकारी प्रयोगशालामा निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न मिल्छ ।
गम्भीर प्रकृतिका व्यक्तिले पीसीआर परीक्षणक्रममा अस्पतालमा लाइन लाग्नुपर्दैन । सरकारले सबै अस्पतालमा कोरोनाका विरामीको उपचार व्यवस्था मिलाएको छ ।
सर्वप्रथम नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर चेकजाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि लक्षण देखिए अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले स्वाब संकलन गर्छन् । त्यसपछि पीसीआर परीक्षण व्यवस्था भए अस्पतालमै, नत्र सुरक्षित तवरमा स्वाब राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाउन सकिन्छ ।
लक्षण देखिएका संक्रमितको कोरोना परीक्षण गर्दा कुनै शुल्क लाग्दैन । रिपोर्ट सामान्यतया स्वाब नमुना प्राप्त भएको २४ देखि ३६ घण्टासम्म आउँछ । तर, होल्डिङ भएका नमूना रिपोर्ट ३६ देखि ४८ घण्टासम्म लाग्न सक्छ ।
आकस्मिक रिपोर्ट १२ घण्टाभित्र प्राप्त हुन्छ । अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामै स्वाब संकलन हुने गरेको छ । कन्टयाक्ट ट्रेसिङ गरेका नमुना हकमा निःशुल्क कोरोना परीक्षण हुने गरिएको छ ।
गुप्ता राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी हुन्
पैसाको भन्दा कानुनको अडिटले महत्व राख्ने संसदीय समितिको ठहर
किन विभाजन भए एमाले र समाजवादी ?
नेपालमा क्रिकेट खेलिरहेको फोटोलाई भारतको सन्दर्भ जोडेर यसरी भ्रामक बनाइयाे
फाइभ जीबाट कोरोनाभाइरस सर्ने दाबी गलत
नरहरि बुटी : कोरोनाभाइरसको औषधि भन्ने दाबी सही हाे ? के भन्छन् ‌आयुर्वेदका चिकित्सक?